Indlela yokujoyina okanye ukujoyina iPDF kwi-intanethi kunye neenkqubo okanye iiwebhusayithi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kukhe kwenzeka kuwe ukuba, xa usebenza ngesihloko, uneefayile ezininzi ze-pdf kwaye kufuneka ujonge enye, emva koko enye, ubuyele kweyokuqala ...? Ukuba kunjalo, ngokuqinisekileyo ukhe wacinga amaxesha amaninzi malunga nokuba kungasikhona isixhobo sokujoyina okanye ukujoyina iiPDF ukwenza umsebenzi wakho ube lula, akunjalo?
Xa i-PDF yaphuma kwiminyaka embalwa edlulileyo, oku akunakwenzeka ngaphandle kokwenza wonke umsebenzi kwakhona. Nangona kunjalo, ngoku izinto zitshintshile kwaye ungakhetha ukujoyina i-PDF ngokulula ngezixhobo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kanjani?
1 Ukubeka i-PDF kunye, yenzelwe ntoni?
1.1 Igama lakhoPDF
1.2 I-Adobe Hlanganisa i-PDF
Ukubeka i-PDF kunye, yenzelwe ntoni?
Kukho abo bathanda ukubeka ndawonye i-PDF kwaye abayithandi le ngcamango. Kwaye inyani kukuba konke kuxhomekeke. Inamanqaku ayo amahle kwaye yintoni engalunganga kangako.
Umzekelo, ukubeka ndawonye iPDF kuthetha ukuba ubungakanani baloo fayile buya kuba bukhulu, kwaye ukuba ukongeza kokubhaliweyo kunemifanekiso, iitafile kunye nezinye izinto eziyenza ibenzima, inokuphelela ekubeni inkulu kangangokuba, xa uyisebenzisa ikhompyuter ayinakho ukuyiqhuba ngaphandle kokuxhoma ngamanye amaxesha.
Kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba inani lamaphepha liza kunyuka kakhulu, eliza kuchaphazela ngokungathanga ngqo umntu. Ayifani into yokubona ukuba unoxwebhu olunamaphepha ali-100 kunelili-1000, inokukucinezela ngakumbi, ngakumbi ukuba kuya kufuneka ufunde onke amaphepha.
Abo bachasene nokubeka ndawonye i-PDF abagcini ngokuxhasa oku kungasentla, kodwa baphinde bathi, ukuba izihloko ezahlukileyo, kungcono ukuba ube ne-pdf nganye nganye, ukuze kuthi xa sele uyenzile, uyigcine kwaye uqhubeke ngezi zinto zilandelayo, ukungabinayo yonke into kuxwebhu olunye.
Nokuba kungayintoni na, ukuba ungomnye wabo bafuna ukujoyina iPDF, nazi izixhobo zokuphumeza.
Enye yeenkqubo zokuqala ezikwi-Intanethi ekufuneka sikuxelele ngazo yenye yezona zaziwayo, hayi nje ukujoyina iiPDF, kodwa nokuguqula iifayile zibe ngamaxwebhu amaninzi (PDF ukuya kwiLizwi, kwiLizwi ukuya kwiJPG ...).
Indlela yokuyisebenzisa ilula kakhulu. Kuya kufuneka uqale ngokuya kwiphepha lewebhu apho kuya kufuneka ukhethe amaxwebhu ePDF ofuna ukuwahlanganisa. Oku akufuneki ukuba kwikhompyuter yakho kuphela, ikwakunika ukhetho lokuzilayisha kwiDrive, iDropbox, njl
Nje ukuba uzilayishe, kuya kufuneka ulinde imizuzu embalwa yokuba ndizidibanise kwaye ndikunike ukhuphele uxwebhu olupheleleyo. Ewe, okukhona amaxwebhu okuqala enesisindo, xa edityanisiwe, kokukhona iziphumo ziya kuba nzima.
I-Adobe Hlanganisa i-PDF
Olu khetho alwaziwa kakuhle, kodwa ungayisebenzisa ukudibanisa iiPDF ezininzi kwifayile enye. Kwaye uyidibanisa njani iPDF? Kulula kakhulu, kufuneka ulandele la manyathelo.
Yiya kwiphepha le I-Adobe Hlanganisa i-PDF.
Kwiphepha uza kubona ukuba ungakhetha iifayile ezingasentla, okanye utsale kwaye ulahle iifayile kwindawo leyo. Kuya kufuneka ukhethe ukuba zeziphi kwaye ubethe isixhobo sokudibanisa sePDF.
Iifayile zinokuhlengahlengiswa kwakhona, into izixhobo ezininzi ezikwi-Intanethi ezingavumeliyo. Nje ukuba unazo, kuya kufuneka ucofe ukudibanisa iifayile.
Lindela imizuzu embalwa kwaye uya kuba nePDF edibeneyo.
Emva kwexesha, ukuba ufuna ukuhlela amaphepha, yabelana ngefayile, njl. emva koko kuya kufuneka ungene kwiAdobe.
Esinye isixhobo sokujoyina i-PDF kwi-Intanethi yile, iSmallPDF. Into elungileyo kukuba, ukuba yinto oyenza rhoqo, ke akufuneki uhlale usiya kwiphepha, ungabeka ulwandiso kwiChannel ukwenza yonke into ibelula kuwe.
Kwaye kufuneka uyenze njani? Kuqala kufuneka uye kwiphepha lewebhu, ngakumbi kwicandelo lokujoyina iPDF. Emva koko, kuya kufuneka ulayishe ifayile, nokuba ikwikhompyuter yakho, kwiDropbox, Google Drayivu okanye nakuphi na okunye ukugcina efini.
Xa sele zilayishiwe, ungazidibanisa iifayile ozifunayo kwaye ucofe kwiQhagamshela iqhosha lakho lePDF.
Kwimizuzu embalwa uza kubona iifayile ezidibeneyo, kwaye unokuzikhuphela okanye uzithumele nge-imeyile, ukope ikhonkco kwaye wabelane ngalo, uzicinezele, njl.
Sele sithethile nawe amatyeli aliqela ngesi sixhobo. Iwebhusayithi apho unokuguqula ifayile ibe yifomathi ezininzi. Kodwa, ukongeza, ikuvumela ukuba ujoyine iPDF. Ewe, apha unesithintelo kwaye oko kukuthi, ngokukodwa, iiPDF azinakugqitha kwi-100MB kwaye, xa zizonke, azinakudlula kwi-150MB nokuba. Ukongeza, unokuqokelela kuphela iiPDF ezingama-20, akushiyi ngaphezulu.
Ngokusetyenziswa kwayo, iyafana ngokufanayo nezinye, kuya kufuneka ulayishe iifayile kwaye ulinde ukuba ikuvumele ukhuphele enye. Unokuphelisa ukuguqula olo xwebhu lokugqibela lube zezinye iifomathi ukuba uyafuna, nokuba liLizwi, iJPG, njl. Ewe, kunye nokusikelwa umda okhoyo, kunokwenzeka ukuba kukho umda xa kufikwa kwimifanekiso.
Le yenye iwebhusayithi oyisebenzisayo ukuba awunayo i-PDF enzima kakhulu. Kulula ukusebenzisa usetyenziso lwewebhu, kodwa ngePDF ayikho ngaphezu kwe-200MB. Indlela esebenza ngayo iyafana nayo yonke eyangaphambili, oko kukuthi, ukhetha iifayile ofuna ukuzijoyina kwaye kwimizuzwana embalwa uya kuba uyenzile ukuze ukwazi ukukhuphela okanye wabelane nabanye.
Ukongeza, njengezinye iiwebhusayithi, unokuguqula iPDF ibe zezinye iifomathi, ukuba uyayifuna, ngaphandle kokushiya iphepha ngokwalo.
Kule meko, sibalaselisa eli phepha kuba ayikuvumeli nje ukuba ujoyine iPDF, kodwa unokujoyina iPDF, iLizwi okanye ezinye iifomathi zokuzijoyina kwaye uziguqule ngaxeshanye zibe yiPDF enye.
Amanyathelo ayafana. Nje ukuba ungene kwiwebhusayithi yabo, kuya kufuneka ukhethe ukuba zeziphi iifayile ofuna ukuzijoyina kwaye ucofe iqhosha elithi Joyina iifayile. Kwimizuzu embalwa uya kuba nefayile yokugqibela kwaye ungayikhuphela ngaphandle kwengxaki (okanye wabelane ngayo okanye uyithumele ngeposi).
Njengoko ubona, unokhetho onokuthi ukhethe kulo ukujoyina iPDF kodwa ugcine engqondweni ukuba, njengoko ufumana izibonelelo, kuya kubakho nezinye izinto ezinokubangela ukuba uphinde ucinge ngalo manyano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Indlela yokujoyina okanye ukujoyina iPDF kwi-intanethi